Fogaanta, Telehealth iyo Talaalka: Caawinta Bukaankeena Waagii COVID - Xarunta Daryeelka Caafimaadka Kaniisadda Falls
Warka Xarunta Caafimaadka Kaniisada Falls
Fogaanta, Telehealth iyo Hadda Tallaalka!
Caawinta Bukaanadayada Xiliga COVID
COVID-19 wuxuu noo ahaa xaqiiqo jirta ku dhawaad ​​laba sano! Weli - maalin kasta waxay u muuqataa inaan helayno "caadi" cusub oo ku saabsan siyaabaha aan u shaqeyno, siyaabaha aan waqti ula qaadanno asxaabta iyo qoyska, iyo siyaabaha aan ku dadaalno inaan ilaalinno nafteena (iyo kuwa kale) caafimaad. Waxay u egtahay wakhti dheer ka hor in dadku ay baranayeen sida loo xidho maaskaro wajiga. Ama marka aysan jirin gacmo nadiifiyaha meel kasta. Ama marka aynaan lahayn goobo dhulka ku yaal oo aan iska fogeyno lixdii cagoodba!
Xarunta Daryeelka Caafimaadka Kaniisadda Falls waxay lahayd doorashooyin muhiim ah oo la sameeyo 20kii bilood ee la soo dhaafay, kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen in la kala hormariyo daryeelka bukaan-socodka iyo sii furan inta lagu jiro faafitaanka COVID-19. In sidaas la sameeyo waxay la macno tahay in wax badan laga beddelo habka aan ugu adeegno bukaannadayada! Tusaalooyinka qaar waa:
Ilaalinta Fogaanta: Laga soo bilaabo calaamadaha lixda cagood ah waxaan u isticmaalnaa si aan u hubinno in bukaannadayadu ay kala fog yihiin midba midka kale, shuruudahayada in dhammaan bukaannada iyo shaqaaluhu ay xidhaan maaskaro wajiga Xaruntayada (oo FCHC ay bixin karto), qaybaha plexiglass ee miiska hore iyo miisaskayada - Xataa meelaynta kuraasta ee aagga sugidda! - Waxaan bedelnay sida aan u awoodno inaan u ilaalino bukaannadayada iyo shaqaalaheena. Caqabadaha, tallaabooyinka fogeynta iyo nadiifiyaha hawada ee qolka iyo nadiifinta joogtada ah ayaa yareeyay faafinta COVID ee xaruntayada oo dhan. Waxa kale oo aanu caadaysanay in bukaan kastaa isticmaalo hal qalin iyo hal sabuurad oo aanu jeermis dilo ka hor inta aan dib loo isticmaalin. (Ka fogaanshiyaha waxa kale oo ay ka dhigan tahay in qolka sugitaanka ee xaruntayaga aanu qaadi karin wehel bukaan-socod; waxaanu u samaynay aag ay saaxiibadu ku sugaan meel ka baxsan Xaruntayada.)
Baaritaanka COVID ee sii socda: Ka hor intaysan soo galin Xaruntayada, dhammaan booqdayaasha waa la qaaday heerkulkooda, waxaana la waydiiyaa inay la kulmeen wax calaamado ah COVID-19 ama haddii ay soo shaac baxeen. Waxaan sidoo kale aruurinay macluumaadka si gaar ah loogu raadinayo xiriirka haddii uu jiro kiis ka soo baxa Xaruntayada, kaas oo aan ku faraxsanahay in aan sheegno in aan midna la soo sheegin.
Buuxinta foomamka Bukaanka iyada oo loo marayo mareegahayagaHal dariiqo oo aan ku sii wadno yareynta faafitaanka bulshada ee COVID waa in la yareeyo waqtiga bukaanka ee Xarunta. FCHC waxay gelisaa dhammaan foomamka bukaan-socodka iyo awoodda ballan-qaadka ee internetka www.fallschurchhealthcare.com Boggayaga Xarunta Bukaanka. Bukaan-socodka waxay buuxin karaan taariikhdooda caafimaad waxayna ka heli karaan macluumaadka caafimaadka onlayn halkii ay gacanta ka heli lahaayeen Xarunta. Bukaan-socodka buuxiya foomamkan khadka-line waxay ku samayn karaan halka ay ku raaxaystaan ​​oo aanay ku degdegin. Foomamka bukaan-socodka si ammaan ah loogu gudbiyo Barayaasha Bukaanka ayaa aad u dhammaystiran, la akhrin karo oo habaysan. Ma jiraan wax isku dayaya in wax walba lagu daro geesaha! In ka badan 90% bukaanadayada ayaa hadda buuxinaya foomamkooda online ka hor ballantooda.
Telehealth: Waxaan ku darnay Telehealth si ay sidoo kale u yareyso waqtiga lagu qaato Xarunta: fadhiyada waxbarashada bukaan-socodka ee qof-ka-qofka ah hadda waxay dhici karaan ka hor ballamaha bukaannadayada - Telehealth waxay siisaa waqti dheeraad ah si ay su'aalo u sii weyddiiso adoon dareemin degdeg. Kulamada telehealth waxaa lagu samayn karaa meel kasta oo bukaankeenu ku dareemo raaxada ugu badan. Iyo kalfadhiyada waxbarashada bukaanka ee telehealth waxay balaadhiyaan saacadahayada shaqada si aan ula kulano shaqaalahayaga fiidkii!
Waan ku hanweynahay in aan nidhaahno isbeddelladani way jiraan waxay naga caawisay inaan sii furnaano oo aan u adeegno bukaanada iyada oo loo marayo aafada COVID: laga bilaabo Maarso 2020 ilaa maanta!
Waxaan weli haynaa isbeddel kale oo aan sameyneyno si aan uga caawino in bukaannadayada iyo shaqaalaheenna lagu hayo waqtiga COVID: Laga bilaabo maanta (Oktoobar 28), Waxaan u samaynaynaa tallaalka COVID-19 mid ay heli karaan bukaannadayada!
FCHC waxay si dhow ula shaqaynaysay Waaxda Caafimaadka ee Virginia si loo helo qiyaasaha Tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19 iyo sidoo kale tababar ku saabsan maamulka si badbaado leh tallaalka. Bukaan-socodka ballan-qaaday ballamaha-qofka-qofka ah waxay heli karaan qaddarkooda koowaad ama labaad ee tallaalka goobta inta lagu jiro ballanta iyada oo aan wax lacag ah laga bixin. (Waqtigan xaadirka ah ma bixinayno tallaalka kobcinta COVID bukaannadayada laakiin waxa laga yaabaa inaan sidaas samayno mustaqbalka dhow.)
Intaa waxaa dheer, waxaan ku faraxsanahay inaan sii wadno bixinta Talaalka hargabka (flu). loogu talagalay bukaanadayada wakhtiga adeega kharash magac ahaan ah. Tallaalka waxaa kula talisa CDC dadka waaweyn intooda badan.
Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha tallaalka, xor ayaad u tahay inaad nagala soo xiriirto taleefanka 703-532-2500 ama annaga foomka xiriir.
qoraal hore Fiiri fiidiyowyada cusub!